"Ny marina hamololona tahaka ny rofia; hisandrahaka tahaka ny sedera any Libanona izy." Salamo 92:12
"Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa." Isaia 40:31
Mbola mijoro eo ilay pyramida tranainy indrindra eto an-tany! Maherin’ny 4000 taona, hono. Nohenoinay tsara ilay manam-pahaizana manokana momba ny tantaran’i Egypta, manazava ny antsipiriany rehetra ara-tantara mikasika ilay fanorenana goavana. Indro izy manondro zavatra miavaka, dia nifantoka tany ny mason’ny rehetra, nijery zavatra mivolon-tany izay tsy vato. Nanazava ilay mpitari-dalana anay: “Andry vita tamin’ny hazo sedera avy any Libanona ireo, notaterina an-tsambo nankatỳ, ary efa teo nandritra ny 4000 taona, kanefa tsy lo”.
Ny sedera dia hazo ela fitombo, ary ny hazony dia tena mahatohitra tsara ny fahalovana sy ny hetraketraky ny bibikely.
Ry namana kristiana, indraindray isika dia mihevitra fa miadana loatra ny fitombontsika sy fivelarantsika ara-panahy. Ny fanofanana antsika anefa dia mandritra ny androm-piainantsika manontolo! Anjarantsika ve ny mandinika sy manombana ny fitombontsika ara-panahy? Avelao izany ho an’ny Tompo, fa aoka isika hikatsaka isanandro izay mahafaly Azy. Mianatra ao amin’ny sekolin’Ilay Andriamanitra mahari-po sy hendry isika. Ao isika, rehefa miatrika ny andraikitra andavanandro any am-piasana, ao an-tokantrano, no ofaniny mba hanana bebe kokoa hatrany fiombonana sy fianteherana aminy ary fahatokiana Azy irery.
“Izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavin’ny andron’i Jesosy Kristy”, hoy ny apostoly Paoly (Filipiana 1:6). Aoka isika hivavaka mandrakariva amin’ny Tompo Jesosy, hamaky ny Teniny, hitady izay hiarahana amin’ny kristiana hafa, ary tsy ho “ketraka amin’ny fanaovan-tsoa” (Galatiana 6:9).